I-Ellicott Dredges - I-Special Mining Dredge EQuebec Circa 1952
I-Special Electric Mining Dredge - “Hydro-Quebec”
Umnikazi: I-Quebec Hydro-Electric Commission, Canada
Usayizi we-Hull - ubude ngezinyawo 220 '
Ubunzulu Obukhulu Bokumba 90 '
Ukudonsa Usayizi Wepayipi - ID 42 "
Ukukhishwa Usayizi wePayipi - ID 36 "
I-Dredge Pump Horsepower 8000
Isisulu sehhashi 1000
Ingqikithi efakiwe I-Horsepower 10,000
INFORMATION PROJECT: Ikhomishini yeQuebec Hydro-Electric Commission yaqala ukwenza izinhlelo emuva kowe-1925 yokwakha umsele omusha, owawuzothatha cishe wonke ukugeleza koMfula iSt. Lawrence, okwenza ukuthi kutholakale ugesi onomphela wama-kilowatts acishe abe yi-1,600,000. Lo mfula wawuzobe ungamakhilomitha angaba ngu-15 ubude, ububanzi obungamamitha angu-3300 namamitha angu-27 ukujula. Kwento okufanele igodi owawuqondene kakhulu ingxenye "dwala ubumba" okuyinto esindayo, okunamathelayo, uhlobo zasolwandle ubumba eyayifakwe ezinkulu glacial. Kumbiwa wawuyizinkulungwane cubic amayadi angu phezu 250,000,000, kukhulu kunenani lezinto ezivunwe kuyo yonke iPanama Canal.
Lokhu bekuwumklamo omusha ngokuphelele futhi "isikhathi besibalulekile". Kusukela inkontileka ukusayina ngo-March 30, 1951, kuze kube zivusa waqala ukusebenza phakathi no-December 1952, isikhathi langemva kwaba izinyanga 21 kuphela, impumelelo enkulu ucabangela ubukhulu enkulu zivusa (angaphezu kuka-10,000 HP), ubunkimbinkimbi umklamo, nokwakhiwa eCanada.
Ngenkathi uNdunankulu uDuplessis wesiFundazwe saseQuebec ehola imicimbi yokugunyazwa, wasichazela lo mklomelo ngale ndlela elandelayo:
"Isicelo sosizo ekwakheni iyunithi entsha yokwehlisa kabusha - i-" HYDRO-QUEBEC "yenziwa yi-Ellicott® Machine Corporation, edume umhlaba wonke ngenxa yayo ama-hydraulic dredges kufaka phakathi amayunithi wePanama Canal nakwezinye izindawo. Le nkampani futhi kwakhiwa wokubacindezela Dredging imishini futhi lasetshenziswa njengoba kokubonisana onjiniyela ngokuba Beauharnois Inkampani ku ukwakhiwa kwalesi zivusa kanye fitting lako e Marine Industries shipyards e Sorel. "
Lokhu kwakunjalo dredge enamandla kunazo zonke emhlabeni yakhelwe kulesosikhathi; imoto eyikhulu yepompu yayiyi-8,000 yamahhashi kanti umsiki wayenamandla amakhulu we-2,000. Kwakuwumsebenzi onzima kakhulu wokudanisa, kepha umsebenzi waphothulwa e-1959, ngohlelo. Umbiko oshicilelwe ku I-Waterways Magazine ka-February 1953, yathi "naphezu kokubiza kwayo kwasekuqaleni, lo dredge wehlise izindleko zokumba udaka lwamatshe ngezigidi ezimbalwa zamaRandi. ”
Umqobelo omkhulu kakhulu futhi onamandla kakhulu wokusika wohlobo lwawo owake wakhiwa ngaleso sikhathi.
Ukwakha indawo ebheke eceleni kwezobuchwepheshe naphezu kobunzima bokusebenza ngasikhathi sinye egcekeni lakwamanye amazwe.
Qala Iphrojekthi Yakho Yokuvuselela Nge-Ellicott